Nicole Prause 2013 EEG လေ့လာမှု (Steele et al ။ , 2013) - Rory Reid ၏ဝေဖန်မှုအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏တုံ့ပြန်မှု - Your Brain On Porn
Nicole Prause 2013 EEG လေ့လာမှုအပေါ် Rory Reid ၏“ ဝေဖန်မှု” အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏တုံ့ပြန်မှု (Steele et al ။ , 2013)
အောက်က YBOP ဇူလိုင်လမှ 2013 တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ် "Prause လေ့လာမှု၏ဝေဖန်မှု" Rory C. Reid, Ph.D (စိတ်ရောဂါကုသမှု, ကယ်လီဖိုးနီးယား, Los Angeles မြို့တက္ကသိုလ်ဦးစီးဌာန) က။ ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးတုန့်ပြန်ရေးထားပြီ Rory Reid ရဲ့ဝေဖန်မှု Nicole Prauseလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire မဟုတ်ဘဲ Hypersexuality, လိင်ပုံများအားဖြင့်ရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related ဖြစ်ပါတယ်“ ဘာလဲ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကလုံးဝဝေဖန်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းအစား၎င်းသည် Prause EEG လေ့လာမှုကိုဖုံးအုပ်ထားသောကာကွယ်မှုဖြစ်သည် (သံမဏိ et al။ , 2013) ။ Rory Reid သည် Gary Wilson အားသူ၏“ ဝေဖန်မှု” တွင် ၁၀ ကြိမ်တိုင်တိုင်ဖော်ပြထားသည်မှာပထမအချက်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ၊ ရိဒ်ကဂယ်ရီ Wilson ၏ ၃ ကြိမ်ဖော်ပြသည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဘလော့ဂ်ပို့စ် Prause ရဲ့လေ့လာမှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမရှိတော့ပါ။ ပျောက်ဆုံးနေရတဲ့အကြောင်းရင်း Reid နဲ့ Prause နှစ် ဦး စလုံးသိပါတယ် စိတ်ပညာယနေ့တွင် Wilson ကရဲ့ post ကိုသာဖယ်ရှားပစ်ရန်, ဒါပေမယ့် ဒီ post နှစ်ခုကတခြားဘလော့ဂါများအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ နောက်ဆုံးတွင် Rory Reid ၏ဝေဖန်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအချက်များကိုဖြေရှင်းရန်ပျက်ကွက်ခြင်း၊ အဲဒီအစား, ရိဒ် YBOP ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအမှန်တကယ်ပြောသောအရာကို mischaracterizing အားဖြင့်ဝေဖန်မှုများကိုလမ်းလွဲ။ မှတ်စု: Rory Reid ဖော်ပြခဲ့သည် သူ၏ UCLA ရုံးသည်ပရာ့စ် (နှင့်သူတို့နှစ် ဦး သည်အခန်းဖော်များဖြစ်လေ့ရှိသည်) ၏ဘေးတွင်ရှိသည်။
UPDATE: ကျနော်တို့ Rory Reid ရဲ့ဝေဖန်မှုမှမီနှင့် သံမဏိ et al ။'' s ကိုအများကြီးဇူလိုင်လ, 2013 ကတည်းက transpired ထားပြီးအမှန်တကယ်တွေ့ရှိချက်များ။ UCLA (ဇန်နဝါရီ, 2015 န်းကျင်) နီကိုးလ် Prause ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့မပေးခဲ့ပါဘူး။ တစ်ဦးပညာသင်နှစ် Prause တစ်စုဆောင်းထားပါတယ်မရှိတော့ ရှည်လျားသောသမိုင်း ဂယ်ရီ Wilson ကများနှင့်သုတေသီများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေ, ကုသ, စိတ်ပညာရှင်ဟောင်း UCLA ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ, တစ်ဦးကိုဗြိတိန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုနာလန်ထူလူအပါအဝငျအခွားသူမြား, တစ်ဦးနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် defaming ၏ အချိန် မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအများအပြားပါမောက္ခ IITAP, ခါးပန်းက The New ကိုမူးယစ်ဆေး, အပညာသင်နှစ်ဂျာနယ် Fight အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီ MDPI သည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်၏ဦးခေါင်းကို CUREUS, နှင့်ဂျာနယ် လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း။ ကြည့်ရှုပါ: Nicole Prause ၏မှတ်တမ်းသည်ဂယ်ရီ Wilson နှင့်အခြားသူများကိုအသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှု (နှင့် ယခုဒုတိယစာမျက်နှာ နှင့်တစ်ဦး တတိယစာမျက်နှာ).
အရေးကြီးအချက်: Prause သူမကဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်မမှန်တောင်းဆိုဆက်လက်နေစဉ် "သားကောင်" ကဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသောတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများဆီသို့အားလုံးအဆက်အသွယ်များနှင့်နှောင့်ယှက်အစပျိုးသူကို Prause ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့စာမကျြနှာမြားစာရငျးအပေါ်ဘယ်သူမှမနီကိုးလ် Prause နှောင့်ယှက်ခဲ့သည်။ "ဆန့်ကျင်ညစ်ညမ်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ" မှ "ယောင်" သို့မဟုတ် misogyny တစ်သားကောင်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုသူမ၏လုပ်ကြံတောင်းဆိုမှုများစာရွက်စာတမ်းများများထဲမှ iota ကင်းမဲ့နေသည်။ တစ်ခုတည်းအင်ဖို-ဂရပ်ဖစ်တစ်ဦးနှောင့်ယှက်ဖော်ပြအခြားသူများအားသူမ၏ထံမှအနည်းငယ်အီးမေးလ်များ, မမှန်သောစွပ်စွဲချက််ငါး spurious အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်ရပ်တန့်အက္ခရာများ: သူမထောက်ပံ့အားလုံးအထောက်အထား Self-generated ဖြစ်ပါတယ်။ အကျဉ်းနည်းပလပ်သို့မဟုတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပယ်ချခဲ့ကြရာ - သင်တို့သည်လည်း Prause အမျိုးမျိုးသောစည်းမျဉ်းအေဂျင်စီများနှင့်အတူတင်သွင်းထားပြီးတရားဝင်တိုင်တန်းတဲ့အရေအတွက်သက်သေအထောက်အထားမြင်လိမ့်မည်။ သူမကထို့နောက်သူမ၏ပစ်မှတ်သူအပေါင်းတို့သည်တောင်းဆိုပေါ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုအအတုအယောင်တိုင်တန်းဟန် "စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်မှာ။ "
Prause ဆိုက်ဘာ-နောက်ယောင်ခံသူတို့ tweet, Facebook, ဒါမှမဟုတ် YBOP အပေါ်စာမကျြနှာမှလင့်များအားဖြင့်ရှိမရှိ၏ပစ်မှတ်ဖြစ်ခြင်းမရှိကွန်ကရစ်ဥပမာပေးပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Prause ရဲ့တွစ်တာတစ်ချိန်ကပါရှိသောတစ်ဦးတည်းကိုလုပ်ကျွေး ရာပေါင်းများစွာသော Wilson ကနှင့်အခြားသောပစ်မှတ်ထားသရေဖျက်မှုနဲ့တိတွိ၏ (Prause ကတည်းက 3,000 ထိုကဲ့သို့သော tweets အကြောင်းကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်) ။ ရိုးရှင်းစွာ ထား. , Prause, သုညသက်သေအထောက်အထားနှင့်အတူနေစဉ်ဒဏ္ဍာရီဖန်တီးထားပါတယ် အနီးကပ်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူ aligned, ဒီထဲကနေမြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့အစည်း (XRCO) ဆုအခမ်းအနား၏အနီရောင်ကော်ဇောပေါ်သူမ၏၏ပုံရိပ် (ညာဘက်အစွန်ဆုံး)။ (ဝီကီပီးဒီးယားအရ, XRCO ဆုပေးပွဲ အမေရိကန်ကပေးတဲ့နေကြတယ် X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဝေဖန်သူများအဖွဲ့ နှစ်စဉ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးနှင့်ကိုယ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လူများt ကိုတစ်ခုတည်းသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူစက်မှုလုပ်ငန်းဆုစက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များအတွက်သီးသန့် reserved Show ဖြစ်ပါတယ်.) ပိုပြီးစာရွက်စာတမ်းများသည်တွေ့: နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း).
Rory ရိဒ် (ဇူလိုင်လ, 2013) အားကျွန်ုပ်တို့၏တုံ့ပြန်မှု:
သူမကဝေဖန်မှုများကိုသာဝေဖန်နေချိန်တွင်၎င်းသည် Prause ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဝေဖန်သူအဖြစ်မှသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသောမေးခွန်းများကိုတုံ့ပြန်မှုကိုတွေ့ရ။ ၀ မ်းသာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသောအချက်များအများစုသည်လျစ်လျူရှုခံရခြင်းသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်ရှိသောလှည့်ဖျားမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည် ဒေါက်တာ Reid အောက်ပါနောက်ထပ်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ဒေါက်တာ Prause မေးရန်:
1) သင့်ရဲ့လေ့လာမှုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနိမ့်မှုနဲ့ဆက်စပ်မှုပိုများတဲ့ ဦး နှောက်ကိုပိုမိုထိတွေ့စေတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်က hypersexuality ဟာတကယ်ကို“ မြင့်မားတဲ့” အလိုဆန္ဒဖြစ်ကြောင်းပြသခြင်းကိုဘာကြောင့်တွေ့ရှိခဲ့တာလဲ။ Prause ၏အသုံးအနှုန်းကိုသတိပြုပါ ဒီအင်တာဗျူးထဲမှာ:
လိင်မှုဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကို ဦး နှောက်၏တုန့်ပြန်မှုသည် hypersexuality ၏ကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းပုံစံများဖြင့်ကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုသာအားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အတိုင်းအတာ. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, hypersexuality လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဦးနှောက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှင်းပြဖို့ပေါ်လာပါဘူး ရုံမြင့်မားသောလိင်စိတ်ရှိခြင်းထက်မဆိုပို။"
John Johnson PhD ရှင်းပြသည့်အတိုင်းသို့သော်ထိုသို့မဖြစ်ခဲ့ပါ ဒီ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများ:
2) Dr. Prause, ဘာကြောင့်“ အတွင်း - ဘာသာရပ်” ထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုပြောတာလဲ၊ သံမဏိ et al ။ဖော်ပြထားသောရလဒ်များသာ
"ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုမှဆွေမျိုးသာယာသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှပိုကြီးသော P300 လွှဲခွင်ကွဲပြားမှု, အဆိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အတိုင်းအတာနှင့်ဆက်စပ်သော, ဒါပေမယ့် hypersexuality ၏အတိုင်းအတာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မခံခဲ့ရပါဘူး။ "
ဘာသာပြန်ချက်: ညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုထိရောက်စွာတုံ့ပြန်နိုင်သူများသည်အဖော်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသည့်ဆန္ဒအနိမ့်အမြင့်ရှိကြသည် (သို့သော်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအလိုမရှိကြပါ) ။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင် ဦး နှောက်ကိုပိုမိုတက်ကြွစေသူနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲမက်သူများသည်တကယ့်လူတစ်ယောက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းထက်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများဖြစ်လိမ့်မည်။ Prause ၏အတွင်း - ဘာသာရပ်ထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
3) ဒေါက်တာ Prause, သင်သည်အဘယ်ကြောင့်မထောက်ပံ့တောင်းဆိုမှုများသင့်ရဲ့စိတ်ပညာယနေ့တွင်အင်တာဗျူးနှင့်အခြားနေရာများတွင်စေခဲ့တာလဲ အဆိုပါ စိတ်ပညာယနေ့တွင် အင်တာဗျူး:
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုပုံတူကူးယူသည်ဆိုပါကဤတွေ့ရှိချက်လိင် "စွဲ" ၏ရှိပြီးသားသီအိုရီတစ်ခုအဓိကစိန်ခေါ်မှုကိုယ်စားပြုလိမ့်မယ်။ ဤအတွေ့ရှိချက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်တင်ပြအကြောင်းပြချက် ကပြသသောကွောငျ့ဖွစျသညျ သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်စွဲသူတို့ရဲ့မူးယစ်ဆေးအခြားစွဲကဲ့သို့ပုံရိပ်တွေတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး။
အထက်ပါဖော်ပြချက်အရ ဦး နှောက်သည်“ အခြားစွဲလမ်းသူများကဲ့သို့တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိ” ဟုဆိုသည်။ In သံမဏိ et al ။ , လိင်မှုပုံများကိုကြည့်သောအခါဘာသာရပ်များသည်ပိုမိုမြင့်မားသော EEG (P300) ဖတ်ရှုမှုရရှိခဲ့ကြသည်။ စွဲသူများသည်၎င်းတို့၏စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောရုပ်ပုံများကိုကြည့်သည့်အခါဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ ကိုကင်းစွဲပေါ်မှာဤလေ့လာမှု) ။ အဆိုပါအောက်မှာမှတ်ချက် စိတ်ပညာယနေ့တွင် အင်တာဗျူး Prause ၏, ဂုဏ်ထူးဆောင်ယောဟနျသအေဂျွန်ဆင်ကပြောကြားခဲ့သည်အကြီးတန်းစိတ်ပညာပါမောက္ခ:
4) Dr, Prause, EEG အချက်အလက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ Inventory (SDI) ရှိမေးခွန်း ၁၄ ခုစလုံးအကြားဆက်စပ်မှုကဘာလဲ။ ငါဖြေပါလိမ့်မယ်: အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကတစ်ကိုယ်တော်လိင်ဆန္ဒကိုဖော်ပြနေပါတယ်။
ဘာသာရပ်များနှင့်ပတ်သက်သည့်အခါသင်အဘယ်ကြောင့်ကမ္ဘာကြီးကို“ မြင့်မားသောအလိုဆန္ဒ” ဟုဆိုလိုသနည်း သာ. ကြီးမြတ် cue-reactivity ကိုရှိခဲ့တယ် တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်အဘို့အနိမ့်အလိုဆန္ဒ။ ထို့အပြင်လေ့လာမှုတွင်“ လိင်မှုဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ” ဟူသောစကားစုကို ၆၃ ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ပြီးလေ့လာမှု၏ခေါင်းစဉ် (Sexual Desire, Hypersexuality …။ ) သည်ပိုမိုများပြားသော ဦး နှောက်ကိုလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်ခေါင်းစဉ်များအရ“ လိင်စွဲလမ်းမှု” သည်အမှန်တကယ်ဆန္ဒပြင်းပြခြင်းဖြစ်သည်ဟုကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယင်းသည်မြင့်မားသောဆန္ဒမဟုတ်ပါ!
5) ဒေါက်တာ Reid ကပြောပါတယ်, မစ္စတာဝီလ်ဆင်သည် EEG အားနည်းပညာတစ်ခုအဖြစ်ထုတ်ပယ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။ အဘယ်မှာကျွန်တော်တစ်ဦးကနည်းပညာအဖြစ် EEG ပယ်ချခဲ့တာလဲ တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်ကြားချက်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးအတွက်ကျဉ်းမြောင်းစွာအနိုင် EEGs အသုံးပြုခဲ့တဲ့2လေ့လာမှုများမှလင့်များရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့မျှသာဓာတုစှဲနဲ့မတူပဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-အပြုအမူစှဲမျိုးစုံသိမြင်သွင်းအားစုပါဝငျသောထောက်ပြသည်။ EEG activation အပေါ်အခြေခံပြီးကျယ်ပြန့်တောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်နည်းပညာ၏မွေးရာပါန့်အသတ်များမဆင်မခြင်ဖြစ်ပါတယ်။
6) ဒေါက်တာ၊ ပရာ့စ်သည်“ စိတ်ရောဂါတစ်ခုတည်းကိုသာ” လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအတိုင်းအတာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုလေ့ရှိသည့်အထောက်အထားသည်အဘယ်မှာရှိသနည်း။ သင်ဤအရာကိုဆက်လက်ပြောဆိုနေဆဲဖြစ်သော်လည်းဤပြောဆိုချက်အတွက်လေ့လာမှုမှပေးထားသောတစ်ခုတည်းသောအထောက်အပံ့ကသူမပြောဆိုချက်ကိုဆန့်ကျင်သည် (လေ့လာမှု 1, လေ့လာမှု 2။ ထို့အပြင် SDI ၏ developer များထံမှမှတ်ချက်များသည်လည်း Ilana Spector, Prause ၏ပြောဆိုချက်များကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ခြင်း (၎င်းတွင်ဖော်ပြထားသောလေ့လာမှုများသည်၎င်းတို့နှင့်ဆန့်ကျင်သည်) ။ Spector က SDI တစ်ခုတည်းအဖြစ်အုပ်ချုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားစိတ်ချစေခဲ့သည်။ "ဒီစကေးသာတိုက်ပိတ်ခြင်းနှင့် dyadic နှစ် ဦး စလုံးပစ္စည်းများအားလုံးသုံးပြီးအတည်ပြုခဲ့ပါတယ် ... ။ အတိုင်းအတာကိုအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းမထားခဲ့သကဲ့သို့၎င်းကိုလည်းအတည်ပြုခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ”
7) ဒေါက်တာ Prause အမှန်သင် cue-သွေးဆောင်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအကဲဖြတ်တစ်ခုစွဲလေ့လာမှုများအတွက်စံ protocol ကိုငါသိ၏။ ထို့နောက်ဘာသာရပ်များခဲ့ကြသည်အဘယ်ကြောင့်7Non-လိင်ကွဲအပါအဝင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး,? လေ့လာမှုအပြီးလေ့လာမှုအရအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည်လိင်ဆိုင်ရာပုံများနှင့်ရုပ်ရှင်များတွင်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသော ဦး နှောက်တုံ့ပြန်မှုရှိကြောင်းအတည်ပြုသည်။ ခိုင်လုံသောဆေးစွဲခြင်း ဦး နှောက်လေ့လာမှုများတွင်တူညီသောလိင်၊ တူညီသောအသက်အရွယ်နှင့်အိုင်ကျူနှင့်အတူလိင်တူချင်း၊ ဒီတစ်ခုတည်းကသင်၏တွေ့ရှိချက်ကိုလျှော့။
8) Dr. Prause၊ လိင်တူမေထုန်မဟုတ်သူများကိုသာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်မည်သို့အပြစ်တင်မည်နည်း။ ထို့နောက် (ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်) ဆက်စပ်မှုကင်းမဲ့ခြင်းမှကျယ်ပြန့်သောကောက်ချက်ဆွဲနိုင်သနည်း။ ဤအချက်သည်သင်၏ရလဒ်များကိုမေးခွန်းထုတ်စရာလည်းဖြစ်စေသည်။
9) သင့်ရဲ့ဘာသာရပ်များ pre-ပြမခံခဲ့ရပါအဘယ်ကြောင့်ဒေါက်တာ Prause? သက်တမ်းရှိစွဲဦးနှောက်လေ့လာမှုများ Pre-ရှိပြီးသားအခြေအနေများ (စိတ်ကျရောဂါ, OCD အခြားစှဲ, etc) အတွက်တစ်ဦးချင်းစီပြ။ ဤသည်မှာလည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသို့သင့်ရဲ့ရလဒ်တွေကိုခေါ်ဆိုသည်။
10) Dr. Prause၊ အဘယ်ကြောင့် SCS (Sexual Compulsivity Scale) ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲစွဲစွဲလမ်းမှုအတွက်သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးများအတွက်မှန်ကန်သောအကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုမဟုတ်ပါသနည်း။ ၎င်းကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ ဆက်ဆံရေး စိတျထဲမှာကို (AIDS ရောဂါကပ်ရောဂါစုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့် ဆက်စပ်. ) ။ P300 ဖတ်နှင့် SCS အကြားမျှဆက်စပ်မှုရှိကြ၏ဘာဖြစ်လို့တနည်းကား, တစ်ဦးတည်းကဒီကရှင်းပြသည်။
နောက်ကျော Sexual Desire Inventory (SDI) နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ကိုယ်ရေ SDI ရမှတ်များကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်လွဲချော်သည်ဟု Rory Reid ၏ပြောဆိုချက်သို့ပြန်သွားသည် -မစ္စတာ Wilson ကဒေါက်တာ Prause လုံလုံလောက်လောက်သူမ၏လေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုထားတဲ့ SDI subscale ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်အခိုင်အမာကြိုးစားခဲ့လိုက်ပါတယ်“ အမှန်တကယ်ပြောတာတွေကိုဖတ်ပါ ဒီမှာ။ ကျနော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတစ်ခုလုံးကို SDI အသုံးပြုသောအခါမျှမဆက်စပ်တည်ရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒါကအချက်ဖြစ်ပါသည်။ သံမဏိ et al EEG ဖတ်နှင့် Partners SDI မေးခွန်းများကိုအကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုအစီရင်ခံတင်ပြနေစဉ်တွင်, ဒီတွေ့ရှိချက်တစ်ခုအထင်မြင်မှားစေသောလေ့လာမှုခေါင်းစဉ်အဖြစ်သူ့ဟာသူထင်ရှားခြင်းနှင့် "လိင်အလိုဆန္ဒ" အကြောင်းကိုမှားယွင်းသောခေါင်းစဉ်များ“ လေ့လာမှုမှရလာဒ်များ
"ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုမှဆွေမျိုးသာယာသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှပိုကြီးသော P300 လွှဲခွင်ကွဲပြားမှု, ခဲ့ပါသည် အနုတ်လက္ခဏာ လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အစီအမံများနှင့်ဆက်စပ်သော, ဒါပေမယ့် hypersexuality ၏အစီအမံနှင့်ဆက်စပ်သော။ "
ဘာသာပြန်ချက်: ညစ်ညမ်းမှုကိုပိုမိုထိရောက်စွာတုံ့ပြန်နိုင်သူများသည်အဖော်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသည့်ဆန္ဒအနိမ့်အမြင့်ရှိကြသည် (သို့သော်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအလိုမရှိကြပါ) ။ နောက်တစ်နည်းပြောရရင် ဦး နှောက်ကိုပိုမိုတက်ကြွစေတဲ့၊ ညစ်ညမ်းလိုတဲ့ဆန္ဒပြင်းပြသူတွေကတကယ့်လူတစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာထက်ညစ်ညမ်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာပါပဲ။ အင်တာဗျူးများနှင့်ခေါင်းစဉ်များနှင့်အတော်လေးကွဲပြားခြားနားသည်။
မှစားပွဲတင်2မှာကြည့်ဖူး လေ့လာမှုအပြည့်အဝကိုစာသား.
ပထမ ဦး စွာ“ မှတ်စု” ကအထွေထွေစမ်းသပ်မှုအမှတ်သည်“ ၃-၂၆” ဖြစ်ပြီး၊ ၂၆.၄၆ ပါ။ ဘာဖြစ်သွားတာလဲ?
ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ SPAN Lab သည် SDI အပြည့်ဖြင့်လိင်ဆန္ဒကိုတိုင်းတာခဲ့ပါက၎င်း၏သုတေသီများသည်စုစုပေါင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အလိုဆန္ဒ ၂၃.၉၂ (၂၆ အနက် ၂၆) တွင်ပူးပေါင်းလိုသောဆန္ဒများမှာအမှတ် ၅၈ ဖြစ်သည်။ (ဖြစ်နိုင်သော 23.92 ၏) ။ ထို့ကြောင့်စစ်မှန်သော“ လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ” သည်ရမှတ် (၈၂) တွင်ရမှတ် (၈၂) ဖြစ်သည်။
လူတစ် ဦး သည်အမှန်တကယ် (မေးခွန်း ၁၄- ခု)“ လိင်မှုဆိုင်ရာဆန္ဒစာရင်း” ရလဒ်ကို EEG အချက်အလက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါဘာဖြစ်မည်နည်း။ အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ “ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု”၊ ရဲရင့်သောမီဒီယာပြitzနာများဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်လက်တွေ့ကျသောနောက်ကွယ်မှခြိမ်းခြောက်မှုများသည်မှားယွင်းသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုဖော်ထုတ်ရန်မလိုအပ်ပါဟူသောအယူအဆကိုဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လက်တွေ့မကျသောပြောဆိုချက်များမရှိပါ။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်, Steele et al ။ EEG ဖတ်ခြင်းနှင့်မေးခွန်းလွှာများအကြားဆက်စပ်မှုနည်းပါးသောတွေ့ရှိချက်များသည်စိတ် ၀ င်စားစရာမရှိသောတရားမဝင်သောတွေ့ရှိချက် (အခြားနည်းစနစ်ဆိုင်ရာအားနည်းချက်များကိုအလွယ်တကူရှင်းပြနိုင်သည်) ဖြစ်လိမ့်မည်။
လေ့လာမှုတွင် SDI နှင့် ပတ်သက်၍ ဒုတိယအမှားပါ ၀ င်သည်ကိုသတိပြုပါ။အဆိုပါ SDI အသုံးပြု. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အဆင့်ဆင့်တိုင်းတာ နှစ်ခုအကြေးခွံ ၏ရေးစပ် ခုနစျပါးပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကို.တကယ်တော့လိင်ဆိုင်ရာဆန္ဒပါ ၀ င်မှုပါ ၀ င်သည် ကိုးမေးခွန်းများကိုပူးပေါင်း, လေးတိုက်ပိတ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုs ကိုနှင့် မေးခွန်းတစ်ခု ကြောင်း (#14) ခွဲခြားမရနိုင်ပါ။ ဤလေ့လာမှု၏ထုတ်ဝေလိုက်ပါသွားသောသွက်မီဒီယာ blitz, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း SDI ရလဒ်များကိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှု-ဖမ်းဆုပ်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင် bases ။ သို့သော်လည်းလေ့လာမှုရေး-up, သုတေသီအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချမှုပေးသွားနိုင်ကြဘူးသော SDI ကိုယ်တိုင်ကခန့်ထင်ရှားတဲ့အမှားအယွင်းများပါရှိသည်။
ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ရဲ့စိတ်ပညာနေ့ကိုဖျက်လိုက်ပြီ။ Dr.Prause မှ“ Psychology Today” အားတရားမ ၀ င်ခြိမ်းခြောက်မှုများကြောင့်၎င်းအားဖယ်ရှားလိုက်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ တကယ်တော့တစ်ရက်အကြာတွင် PT သည်ငါတို့၏အစောပိုင်းရာထူးကိုဖယ်ရှားခဲ့သည် အခြား SPAN Lab မှလေ့လာမှု။ ဘလော့ဂ်၏4နှစ်များတွင်ဖယ်ရှားကျနော်တို့ရှိခဲ့တယ်တစ်ခုတည်းသောပို့စ်များကို Prause သက်ဆိုင်သောပို့စ်များကိုဖြစ်ကြသည်။ ဟမ်။ သိပ္ပံပွင့်လင်းဆွေးနွေးငြင်းခုံမဟုတ်ဘဲနောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းများခြိမ်းခြောက်ဒီလိုမျိုးအပေါ်ဆိုရမှာပါ။
ဒေါက်တာရိဒ် (အထက်) သည်“ စိတ်ပညာယနေ့” (ယခုအတည်မပြုရသေးသောစာမျက်နှာကိုပြသထားသည့်) ၏ယခင်ရာထူးနှင့်နှစ်ကြိမ်ဆက်စပ်ခဲ့ပြီးအမှားများပါ ၀ င်သည်ဟူသော“ စိတ်ပညာ၏ယနေ့ယုံကြည်ချက်” ကြောင့်၎င်းကိုဖျက်ပစ်မည်ဟုအကြံပြုခဲ့သည်။ Dr.Prause မှကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်တရားမ ၀ င်၊ တရားမ ၀ င်သောတရား ၀ င်ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဤအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်သံသယရှိသည်။
အီးမေးလ်အကျဉ်းချုပ်များကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မုန်းသော်လည်းဤကိစ္စတွင်စိတ် ၀ င်စားသောစာဖတ်သူများသည် Dr. Prause ၏နည်းဗျူဟာများကိုပိုမိုပြည့်စုံသောရုပ်ပုံရရှိစေရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ခံစားမိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သူမအကြားအီးမေးလ်လဲလှယ်မှုတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ပါ။ ဤဖြစ်ရပ်များသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလတွင်သူမရေးသားထုတ်ဝေထားခြင်းမရှိသေးသည့်ယခုလေ့လာမှု၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်ကို“ ပေါက်ကြားခြင်း” ဖြစ်သည့်စာရေးသားသူကိုစာနာတတ်သည့်ဘလော့ဂါဒေးဗစ်လေယီအား“ ပေါက်ကြား” ခဲ့သည့်လများကဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှား။ သူမသည်နောက်ပိုင်းတွင် "စိတ်ပညာယနေ့" ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်ကြားချက်ကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ စကားမစပ်, ထို့နောက်ကျွန်တော် (Prause သည်အခြားသူများမှမရရှိနိုင်ပါရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သော) ယိုစိမ့်လေ့လာမှုအပေါ်အခြေခံပြီး Ley ရဲ့ post ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန် "Psychology Today" အယ်ဒီတာများကိုမေးသော်, နှင့် "Psychology Today" ကဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည် ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့ (တရားသူကြီး: ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ David Ley ၏ဘလော့ဂ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်ကြားချက်ဘလော့ဂ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပို့စ်အောက်ရှိမှတ်ချက်များကိုကြည့်ရန် ဂယ်ရီလဲလှယ် နီကိုးလ် Prause နှင့်အတူ။ )
နောက်ဆုံးလေ့လာမှုထွက်လာသောအခါ Prause ကနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအင်တာဗျူးတစ်ခုပြုလုပ်ရန် Brian Mustanski ကိုခေါ်ယူခဲ့သည်။ သူ့ post ကိုကျွန်တော်တုန့်ပြန်ခဲ့သည်။ Prause က“ Psychology Today” ကိုဖယ်ရှားလိုက်သည်။
(Prause သူမ၏နှစ်ခုလေ့လာမှုများနှင့် ပတ်သက်. ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်ကြားချက်ဘလော့ဂ်များအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်အခွင့်အလမ်းအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်ကိုသတိပြုပါတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်နှစ်ဦးစလုံး၏ porn လေ့လာဝေဖန်မှု။ အဲဒီအစားသူမကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ယူရန်မရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ယခုသူသည် Dr. Reid ၏ဝဘ်ဆိုက်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်၏နောက်ကွယ်တွင်ဝှက်ထားလျက်ရှိသည်။ ဝေဖန်သူများ၏တိုက်ရိုက်တုန့်ပြန်မှုကိုခွင့်မပြုပါ။
UPDATE: ဤစာမျက်နှာကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖန်တီးပြီးကတည်းက Prause သည်ဂယ်ရီ Wilson နှင့်အခြားသူများကို ဆက်လက်၍ ပစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးသုတေသီများ၊ ဆရာဝန်များ၊ ကုသသူများ၊ အချိန် မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအများအပြားပါမောက္ခ IITAP, ခါးပန်းက The New ကိုမူးယစ်ဆေး, ထှကျမွောကျရာ Cry သည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ် Fight အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီ MDPI သည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်၏ဦးခေါင်းကို CUREUS, နှင့်ဂျာနယ် လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း။ ကြည့်ရှုပါ: ဂယ်လီ Wilson နှင့်အခြားသူများကိုနီကိုး Prause ၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မှုနှင့်အသရေဖျက်မှု
UPDATE: ဇန်နဝါရီလ 2015 - Nicole Prause သည် UCLA သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာဌာနတွင်မှမရှိတော့ပါ။
UPDATE: ၏ 8 peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းယခုရှိပါတယ် သံမဏိ et al ။, 2013 ။ အားလုံးအောက်ပါ YBOP ဝေဖန်မှုနှင့်အတူ align။ အားလုံး၏ပုံကိုတွေ့ရှိချက်ကိုဖော်ပြရန် သံမဏိ et al ။, 2013 အဆိုပါ porn စွဲမော်ဒယ်မှထောက်ခံမှုချေးငှားရမည်။ စက္ကူ #1 ဖို့တစ်ခုတည်းကိုသာကျိန် ဆို. ပူဇော်ဖြစ်ပါသည် သံမဏိ et al ။ စာတမ်းများ 2-8 ခွဲခြားစိတ်ဖြာကဏ္ဍများဆံ့ သံမဏိ et al ။ , 2013:
နီကိုးလ် Prause - ဂယ်ရီ Wilson အီးမေးလ်လဲလှယ်သည်
မတ်လ 5, 2013
တစ်ဦးရေးသားဖို့တက် "လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှား," ဒါဝိဒျ Ley နှင့်နီကိုးလ် Prause အသင်း၏အာဘော် စိတ်ပညာယနေ့တွင် မဟာဗျူဟာခေါင်းစဉ်နှင့်အတူဘလော့ဂ်ပို့စ်: "Porn on Brain - ဒါကစွဲလမ်းစရာမရှိဘူး။ ” (Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် က်ဘ်ဆိုက် Wilson ကတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ) နီကိုးလ်ပရပ်စ်၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း EEG လေ့လာမှုအကြောင်း (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသည် hypersexuality မဟုတ်ဘဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များမှရရှိသော neurophysiological response များနှင့်ဆက်စပ်သည်”).
Ley သည် Prause ၏အတည်မပြုရသေးသောလေ့လာမှုကို (၅ လအကြာတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်) ရရှိခဲ့သည်ကိုသတိပြုပါ။ ဘလော့ဂ်ပို့စ်သည် Wilson ၏ 'Your Brain on Porn' ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး YBOP သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုတားမြစ်ရန်အကြံပြုခဲ့သည်။
အဓိကအချက်: ငါးလ Prause ရဲ့ EEG လေ့လာမှုမပြုမီ (သံမဏိ et al။ , 2013) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်, Prause နှင့် Ley နှစ်ဦးစလုံးဂယ်ရီ Wilson ကပစ်မှတ်ထားခံခဲ့ရခြင်းနှင့် မိမိအက်ဘ်ဆိုက်.
မတ်လ 7, 2013
Wilson ကတစ်ဦးပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ စိတ်ပညာယနေ့တွင် David Ley ပို့စ်တွင်ပါသောအကြောင်းအရာများကို blog post Ley ၏ blog post နှင့် Wilson ၏တုံ့ပြန်မှုသည်နောက်ဆုံးတွင်ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် အယ်ဒီတာများကိုအခြေခံလေ့လာချက်မရရှိနိုင်ပါ။ မူရင်း Ley နှင့် Wilson ၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုမော်ကွန်းတင်ထားနိုင်သည် ဒီမှာ။ Wilson ၏ blog post သည် Ley's ကိုသာတုံ့ပြန်သည်ဟုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြရန်အရေးကြီးသည် ဖေါ်ပြချက် ချီးမွမ်းခြင်းလေ့လာမှု၏။ နောက်ပိုင်းတွင်နီကိုးလ်ပရပ်စ် (Wilson) သည် Wilson အားသူမ၏လေ့လာမှုအားမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခဲ့သည် (သူမနှင့် Ley တို့သာမြင်တွေ့ခဲ့ရသည် နောက်ပိုင်းမှာအခြေအမြစ်မရှိဖြစ်ပြ).
Wilson ကလေ့လာမှုပြုရန် David Ley ၏ဆောင်းပါးတွင်ရေးသားထားသည်။
ဟေးဒေးဗစ် - ဘယ်တုန်းကမှမထုတ်ဝေသေးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုဖော်ပြမယ့်လေ့လာမှုတစ်ခုမှာခင်ဗျားရဲ့လက်ကိုဘယ်လိုရခဲ့သလဲဆိုတာကျွန်တော်တွေးမိသည်။ ငါ့ကိုစာတစ်စောင်ပို့ပေးချင်ပါသလား။
ဒါဝိဒ်သည် Ley ကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး။
ဧပြီလ 10, 2013
အထက်ပါမှတ်ချက်ကိုတုန့်ပြန်မှာတော့ Prause အဆိုပါဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ စိတ်ပညာယနေ့တွင် အယ်ဒီတာများနှင့် Wilson ကအောက်ပါအချက်များကိုမေးလ်ပို့ပေး။ အီးမေးလ်အတွက်, Prause ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ Wilson ကတိုက်ခိုက်နှင့်မှားယွင်းစွာသူလေ့လာမှုအဘို့မမေးခဲ့ဘူးကြောင်းဖော်ပြသည်။ သူသည်တကယ်တော့, ထိုသို့ဒါဝိဒ်သည် Ley ဟုမေးခဲ့သည်။ အီးမေးလ်:
မှ: နီကိုးလ် Prause[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]________>
ချစ်ခင်ရပါသောမစ္စတာ Wilson က,
လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သည့်စာမူကိုပင်တောင်းခံခြင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့၏သိပ္ပံကိုမှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်းသည်သင့်အတွက်တရားမဝင်ပါ။ ဒါဟာကဲ့သို့သောကုသလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးသည်အမှန်တကယ်မျှတမှုရှိသည်။ သင်တို့နှင့်မတူသည်မှာဤစာစောင်၏နှစ်ဖက်စလုံးမှရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်သောစာပေများကျွန်ုပ်ရှိသည်။ သင်မပြုလုပ်သည့်အရာများကိုဖော်ပြခြင်းဖြင့်၎င်းကိုရှုတ်ချရန်သင်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့စိတ်ပညာဖြင့်ယနေ့ရှာဖွေနေသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ထပ်မံအရေးယူမှုများမလုပ်ခင်ဤရာထူးကိုကိုယ်တိုင်ဖယ်ရှားရန်သင့်အားအကြံပေးလိမ့်မည်။
သင်၏စာအုပ်များကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းဖြင့်ရောင်းချပါ။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုငွေရှာဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ ငါဒီလေ့လာမှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြနိုင်တယ်၊ ဒီဇိုင်းနှင့်ဒေတာများသော်လည်း၊ လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သည့်စာမူကိုတောင်းခံရုံသာမကပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများပါ ၀ င်ခြင်းမှာအလွန်ကွာခြားသည်။ ရှက်ပြီးလဲသေဖို့ကောင်းတယ်။
နီကိုးလ် Prause, Ph.D
ဖြည့်စွက်ကာ, စိတ်ပညာယနေ့တွင်အယ်ဒီတာများ Prause ကနေတစ်စက္ကန့်ကိုအီးမေးလ်ပေးပို့:
နေ့စွဲ: ဧပြီလ 10, 2013 5: 13: 30 pm တွင် EDT
ခေါင်းစဉ်: အဘလော့များအပေါ် Comment
မှ: နီကိုးလ် Prause, PhD[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]_____________
ငါဂယ်ရီ Wilson ကပေါ်နေဖြင့်သတ္တုတွင်း၏လေ့လာမှုတစ်ခုအကြောင်းကိုစာဖြင့်ရေးသားဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုမြင်ရအံ့သြခဲ့ စိတ်ပညာယနေ့တွင်.
ငါသူ့ကိုလေ့လာမှုများ၏သူ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူကိုယ်စားပြုအတူပြဿနာကိုအဘယ်သူမျှမရှိသည်, ဒါပေမဲ့သူမနှင့်သတ္တုတွင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ခဲ့ကြပါဘူး။ ဒါဟာပြန်လည်သုံးသပ်အောက်မှာဖြစ်ပြီးသူသည်စာရေးသူမဆိုနေတဲ့ကော်ပီကိုမေတ္တာရပ်ခံတာပါ။ ငါကဖယ်ရှားသင့်ကြောင်းသူ့ကိုအကြောင်းကြား။ သူကသေးပြုမထားပါဘူး။ ဒါကြောင့်အများပြည်သူစံချိန်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်က၏သင်တန်း, သူကမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်နှင့်ပိုပြီးတိကျစွာ (မျှော်လင့်) ကကိုယ်စားပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ်, သိလျက်သူတို့ကို denigrate ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲမှားအောင်တရားမဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါစိတ်ပညာယနေ့တွင်အလေးအနက်ထားဤအမှုကြာလိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့၏ cue အပြည့်အဝဖြစ်ပြီးတုံ့ပြန်ရန်ကြာကြာယူစေခြင်းငှါအမှု၌, အပြင်အခြားအဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါအခြေအမြစ်ဥပဒေရေးရာခြိမ်းခြောက်မှုများ, မှားယွင်းသောတောင်းဆိုမှုများနှင့်သားကောင်ကစား Wilson ကနှင့်အတူသူမ၏ပထမဦးဆုံးထိတွေ့စတင်ဖို့။ အဘယ်အရာကိုမျှ Prause မှန် says:
Wilson က Prause ၏လေ့လာမှုကိုမည်သည့်နည်းနှင့်မျှဖော်ပြခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သူက Ley's ကိုပဲတုန့်ပြန်သည် ဖေါ်ပြချက် အဆိုပါလေ့လာမှု၏။ ဖတ် Ley's နှင့် Wilson ၏ blog postများ နှင့်ကိုယ်အဘို့တရားစီရင်တော်မူ။
ဤသည်နေ့ရက်မှ Prause Wilson ကယ့်မတ်လ, 2013 အတွက်တစ်ခုတည်းစကားလုံးကိုချေပရန်အတွက်မရှိသေးပါ စိတ်ပညာယနေ့တွင် post ကို, ဒါမှမဟုတ် Wilson ကဇူလိုင်လအတွင်းကရေးသားခဲ့သည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း သူမ၏ EEG လေ့လာမှုအပြီးနောက်ဆုံးတော့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ မဟုတ်သလို Prause (သူမ၏ 2013 EEG လေ့လာမှုလေး peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှုအတွက်တစ်ခုတည်းစကားလုံးချေပထားပါတယ်1, 2, 3, 4။ ) ။
Wilson က (Prause ကထောက်ပံ့ဖို့ငြင်းဆန်) ကိုလေ့လာမှုတစ်ခုမိတ္တူတောင်း။
Prause Wilson ကအားလုံးကိုအဆက်အသွယ်စတင်ခဲ့သည်။
Wilson ၏အီးမေးလ် တုံ့ပြန်ချက် နီကိုးလ် Prause မှ:
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ 10ပြီ ၁၀ ရက်၊ ညနေ ၃း၀၄ နာရီကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဂယ်ရီဝီလ်ဆင် <> မှရေးသားခဲ့သည်။
ငါသည်သင်တို့၏မှတ်ချက်အောက်တွင် commented ။ ကြည့်ရှိသည်။
ဒီဟာကိုငွေမပေးနိုင်ဘူး ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ကြော်ငြာမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလှူငွေကိုလက်ခံပါသည်။ ရောင်းရန် ၀ န်ဆောင်မှုမရှိပါဘူး ကျွန်ုပ်မှာရောင်းစရာစာအုပ်မရှိပါဘူး PT တွင်တွေ့ရသောကျွန်ုပ်၏ဇနီး၏စာအုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်အမှန်တကယ်မျှတမှုရှိလိုလျှင် Dr. Ley နှင့်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့လေ့လာမှုအပြည့်အစုံကိုပေးပို့ပြီး၎င်းအကြောင်းကိုဘလော့ဂ်ပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုပါ။
ဧပြီလ 12, 2013
နှစ်ရက်အကြာတွင် Prause Wilson ကနောက်တဖန်ထပ်မံဥပဒေရေးရာအရေးယူခြိမ်းခြောက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ။ သူမသည်တစ်နည်းနည်းနဲ့ချခြေရာခံ သင်၏ ဦး နှောက်ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောညစ်ညမ်းသည့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် Wilson ၏မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် David Ley ၏မူလ blog post နှင့် ပတ်သက်၍ ရှည်လျားသောချည်မျှင်တွင်တင်ခဲ့သည်။ Wilson ၏မှတ်ချက်သည် Ley နှင့် Wilson တို့၏အဘယ်ကြောင့်နှစ် ဦး စလုံးရှင်းပြရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် ပို့စ်များကိုဖယ်ရှားခဲ့ စိတ်ပညာယနေ့တွင်။ တစ်ဦးမဟုတ်ပင်ဂူဂဲလ်ရှာဖွေရေးကြောင့် post ကိုနေရာချထားပေးနိုင်အဖြစ်ဤ cyberstalking ၏ Prause ရဲ့ပုံစံအချက်ပြ။ ဘယ်လို Prause တစ်ဦးညစ်ညမ်းပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်ပေါ်မှာဤချည်အကြောင်းကိုငါသိ၏ခဲ့တာလဲ
အဆိုပါ Prause အီးမေးလ်က:
နီကိုးလ် Prause ([အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]_______)
သင့်ရဲ့ post ကိုခုနှစ်တွင်: http://yourbrainrebalanced.com/index.php?topic=7522.50
သငျသညျမှားယွင်းစွာပြောဆိုနေသည်မှာ -“ သူမရဲ့လေ့လာမှုကိုကြည့်ရှုရန်တောင်းဆိုခြင်းဖြင့်သူမကိုတော်တော်လေးဆိုးဝါးသောအီးမေးလ်များကိုကျွန်ုပ်တုန့်ပြန်ခဲ့ပြီးသူမကငြင်းခဲ့သည်။ ”
ဒီအသရေဖျက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ post ကိုဖယ်ရှားသို့မဟုတ်ငါဥပဒေရေးရာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူတက်လိုကျပါမညျပေးပါ။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ 12ပြီ ၁၂ ရက်နေ့နံနက် ၁၁း၀၉ နာရီတွင်ဂယ်ရီဝီလ်ဆင် <> မှရေးသားခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ဇနီးသည်ယေးလ်ဥပဒေကျောင်းပြီးကြောင်းသင်မသိခဲ့ပါ။ ငါသရေဖျက်မှုဘာမျှမကပြောသည်။ တကယ်တော့ငါ့ထုတ်ပြန်ချက်များအတော်လေးတိကျဖြစ်ကြသည်။
ထို့အပြင် 3), သငျသညျမဟုတ်မမှန်ငါ porn စွဲမှထမြောက်ဖို့ရုန်းကန်နေရယောက်ျားတွေကနေငွေရှာကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ PT post ကိုမင်းကလွဲပြီးအခြားသူကသင်၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုမပြုသေးသောလေ့လာမှုကို David Ley ၏ဖော်ပြချက်အပေါ်ရှင်းလင်းစွာတုန့်ပြန်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါ Ley ရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုမမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လက comment အပိုင်းမှာဒီအကြောင်းကိုမေးရင်တောင်ငါ့ကိုအပြည့်အဝလေ့လာနိုင်ဖို့သင်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။
သငျသညျ (မှတ်ချက်များအပိုင်းများတွင် စုပေါင်း. ) ကြှနျုပျ၏မူရငျးမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ရသေးရှိသည်:
၃) လွန်ခဲ့သောတစ်လက Ley ၏ post အောက်တွင်သင်မှတ်ချက်ပေးသည်။ ငါသည်သင်တို့၏လေ့လာမှုနှင့်ပတ်သက်။ သငျသညျညွှန်ကြားထားတိကျတဲ့မေးခွန်းများကိုနှင့်အတူ, သင်မှတ်ချက်အောက်မှာမှတ်ချက်ချက်ချင်းငါတင်ခဲ့သည်။ ဒါကလေ့လာမှုကိုတုန့်ပြန်ရန်နှင့်သင်ကမ်းလှမ်းရန်အတွက်သင့်အခွင့်အရေးပဲ။ မင်းလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။ အဘယ်ကြောင့်?
ငါတို့လဲလှယ်တာကိုလူသိရှင်ကြားလုပ်တာကောင်းတယ် သင်၏သုတေသနပြုရန်ဝံ့ဝံ့သော PT ဘလော့ဂါများအားသင်တရားစွဲဆိုသောအခါစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းပေလော။
နောက်ထပ်အရူးပြောဆိုမှုများနှင့်တရားဝင်ခြိမ်းခြောက်မှုများဖြင့်အီးမေးလ်များကိုထပ်မံချီးမွမ်းပါ [မှတ်ချက်: Wilson ကမဟုတ်သလိုသူ့ဇနီးမအစဉ်အဆက် Prause နှင့်အဆက်အသွယ်စတင်ခဲ့သည်။ သူမသည်ထပ်တလဲလဲသူတို့ကိုဆက်သွယ်နှင့်အခြေအမြစ်ဥပဒေရေးရာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူသူတို့ကိုခြိမ်းခြောက်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ]
မှ: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]_________ နေ့စွဲ: Fri, 12 ဧပြီ 2013 15: 01: 09 -0700
subject: Re: စိတ်ပညာကနေတဆင့် [PT] စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယနေ့တွင်
သင် (သင်ရောသင်၏ဇနီး၏အဆက်အသွယ်မလိုချင်ကြောင်း) သင်နှင့်သင်၏ဇနီးကိုအကြောင်းကြားရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏နေအိမ်ပြည်နယ်ရှိအထုံးအဖွဲ့တို့ကိုတစ် ဦး လျှင် (http://courts.oregon.gov/Lane/Restraining.page), မည်သည့်အပိုဆောင်းနှောင့်ယှက်အဆက်အသွယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်သောနှောင့်ယှက်အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူလိမ့်မည်။
Wilson ကဖြောင့်စံချိန်တင်ထားရန်, Prause မှသူ၏နောက်ဆုံးအီးမေးလ်ကိုပို့ပေး: သူမကအားလုံးအဆက်အသွယ်များနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများ (နှင့်မှားယွင်းသောတောင်းဆိုမှုများ) အောင်သာလူတစ်ဦးစတင်တကြောင်း:
အကြောင်းအရာ nprause မှ: RE: စိတ်ပညာကနေတဆင့် [PT] စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးယနေ့တွင်
နေ့စွဲ: Fri, 12 ဧပြီ 2013 15: 44: 12 -0700
နှောင့်ယှက်? ငါဒီတစ်ခုအပါအဝင်သင်တို့နှင့်အတူရှိတဦးတည်းကအီးမေးလ်လဲလှယ်, အစပျိုးပြီမဟုတ်။
သင်ကနောက်ဆုံးအီးမေးလ်ကရှိခဲ့ဘယ်မှာ4/ 10 / 13, ပေါ်တွင်သင်ခြင်းဖြင့်အစပျိုး, ပထမဦးဆုံး။ ထိုအအောက်ကတဦးတည်း, တကယ်တော့သင်ကဒုတိယအကြိမ်ငါ့ကိုခြိမ်းခြောက်ကြသောအခါ, သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်နှောင့်ယှက်သောမှားယွင်းသောစှဲဖန်တီးရန်ကြိုးစားလျက်ရှိသည်ရှိရာ။
ကျွန်ုပ်၏ blog post ကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ရန် Psychology Today ၏အယ်ဒီတာနှင့်လည်းဆက်သွယ်သူဖြစ်သည်။ ငါ့ဇနီးကမင်းနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိခဲ့ဘူး။
ဒါက Nicole Prause အတွက်အစပဲ။ ကြည့်ပါ: